२० वर्षअघि सर्पले टोकेर मरेका भनिएका व्यक्ति जिउँदै घर फर्किए • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
२० वर्षअघि सर्पले टोकेर मरेका भनिएका व्यक्ति जिउँदै घर फर्किए
काठमाडौं। सर्पले टोकेर मरेका भनिएका व्यक्ति जिउँदै घर फर्किएका छन् । फर्किने व्यक्ति २० वर्षअघि मरेको भनिएका व्यक्ति नै भएको पुष्टि भएको छ । उनी गाउँ फर्किंदा सुरुमा गाउँलेहरुले शंका गरेका थिए । तर, फर्किने त्यही व्यक्ति भएको पुष्टि भएपछि अहिले गाउँलेहरु यसबारे थप जान्न उत्सुक भएका छन् ।
भारतको उत्तर प्रदेशको आजमगढका दीपक नाम गरेका ६ वर्षका बालकलाई २० वर्षअघि सर्पले टोकेको थियो । पिता अनिल र आमा बिन्दुका छोरा दीपकलाई सर्पले टोकेपछि उनलाई झारफुक गरियो तर कुनै फाइदा भएन । अन्त्यमा गाउँलेहरुले उनलाई मरेको सम्झिएर केराको थाममा राखेर खोलामा बगाइदिए । अहिले गाउँ फर्किएका २६ वर्षका दीपक भन्छन् ‘सुरुको त मलाई थाहा छैन तर होस आएदेखि म मऊ वनदेवी आश्रममा एक साधुकहाँ बसें । सर्पको विषको प्रभाव हो वा लामो समयको बेहोसीको असर मलाई पहिलेको कुरा ठिकसँग याद भएन ।’
साधुसँग बस्दाबस्दै दीपकले केही नजिकका ठाउँहरुमा मजदुरी गर्न जान थाले । यही बीचमा तीन वर्ष पहिले साधुको मृत्यु भयो । त्यसपछि उनी साधुको आश्रम छोडेर शहर आएर मजदुरी गर्न थाले । यही क्रममा उनको भेट पाही गाउँका अर्का मजदुर राजेन्द्रसँग भयो । कुरैकुरामा राजेन्द्रले घर सोधेपछि दीपकले आफ्नो साधुसँग बस्दाको सबै घटना सुनाए । राजेन्द्रलाई २० वर्ष अगाडिको घटना याद थियो । उनले दीपकका मातापितासँग भेटिएको युवक उनीहरुको छोरा हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरे । भोलिपल्ट सबै मुबारकपुर गए । त्यहाँ आमा बिन्दुले दीपकको कपडा खोलिन् । दीपकको पिठ्युँमा सानैमा जलेको निशान थियो जुन निशान अहिले पनि जस्ताको तस्तै थियो । योबाहेक अन्य तथ्यहरु पनि जोड्दै जाँदा उनी दीपक नै भएको पुष्टि भएको बताइएको छ ।
हनीमून मनाउनुअघि दुलहीलाई पर्यो यस्तो आपत
यस्तो शहर जहाँ बस्दा उल्टो पैसा पाइन्छ
२ सय बर्ष पछि मानिस भगवान बन्ने ,मृत्युलाई पनि काबुमा गर्ने सकिने